Daahir Xaaji Cali: Xusuustii Xidiggii God Galay – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Allhadaaftimo April 28, 2020 April 28, 2020 Uncategorized
Durbadiiba Daahir waa hanaqaaday. Iskuulkii dugsigii dhexe ka dib wuxuu galay iskuul xirfadeed oo lagu baran jirey farsamooyinka gacanta oo la oran jirey, APPRENTICE. Daahir, ayaa si dhaqsa ah wuxuu u noqday xirfadle koronto yaqaan ah oo aad loogu qancay farsamayaqaannimadiisa. Xirfaddiisaasi waxay u sahashay inuu si fudud shaqo uga helo shirkad iskuulkaas ku xidhnayd oo magaceeda loo soo gaabin jirey CRE. Wuxuu mar labaad shaqo ka helay shirkad Ingiriisku lahaa oo la oran jirey BritishPetroleum.
Ogow xilligaas waa 60meeyadii. Waa markii dunida inteeda badan dabaylaha xorriyadeed gilgilayeen. Waa markii isbeddel xoog lihi ka aloosnaa carra edeg hareeraheeda, oo da’ayar fara badani is dhexgal iyo furfurnaan u jeellanayeen, kaas oo lid ku ahaa dabcigii gumaysigii iyo is faquuqii. Dadka hibada fanka, qoraalka iyo suugaanta noocyadeeda badan ku galladan ayaa dunida gees ilaa gees ka orinayay oo isu baaqayay. Maadaama Daahir lahaa ilbaxnimo uu ku oddorosi karay baahida shabaabka ee casrigaas cusbaa wuxuu u kabo illaday sidii uu dadka da’yarta ah uga haqabtiri lahaa baahiyahooda hal-abuur iyo muusig.Wuxuu la xidhiidhay shirkad maraykan ah oo la oran jirey Columbia Records. Waxayna shirkaddu suuqgayn jirtey muusiggii xilligii dhaqdhaqaaqii xorriyaddoonka, siiba muusiggii halgamaayadii hibadooda isku xorraynayey ee Madow Ameerikaanka, kuwaas oo xagga hore kaga jirey dhaqdhaqaaqii xuquuqraadiska madaniga (Civil Rights Movement). Suugaantaa qalaad iyo muusiggaa ay da’yarta xilligaasi u heellanayd ayaa Daahir waxay u noqdeen il uu ka cokanaysiiyo dhallinyaradii Soomaaliyeed ee dunida hore u guuraysa dareenka la wadaagaysay.
Wuxuu mawjadaha ummad xiiseheeda leh dhex mushaaxaba waxaa la soo gaaray masiibadii weynayd ee Soomaali ku habsatay, ee qaarna gallaafatay, qaarkii soo hadhayna qarniyada dib u celisay, oo in bandan debedmeerka ka dhigtay. Wuxuu waddanka ka soo baxay bishii 2aad, 1991, wuxuuna bilowgii galay dalka Suuriya. Maadaama oo uu lahaa hibo luqadeed, siiba afafka Carabiga iyo Ingriisiga, wuxuu wadashaqayn fiican la yeeshay madaxdii reer Suuriya. Wuxuuna isu qorsheeyey inuu u noqdo ummaddiisa hoggaan u sahla martinimadooda, mar haddii ay soo barakaceen. Wuxuu noqday SheikhulSomaal ama wakiilkii bulshada Soomaaliyeed ee soo qaxday.
Saqajaan ileen kama siqsiqo calalka mayd saaran!
Musqul buu ka helay benisaliinmuhandaskeediiye
Previous 63 xildhibaan ayaa xalay saqdii dhexe aya mowshin ka gudbiyeen gudoomiyaha barlamaanka hirshabelle
Next SIDEE AYAY KU BILAABMEEN WADAHADALADDII SOMALILAND IYO SOOMAALIYA? WASIIR HORE CABDISAMED MACALIN